Fomba 4 manangom-bola hamatsiana ny fialan-tsasatrao manaraka
Home » Lahatsoratra farany farany » Hostpost » Fomba 4 manangom-bola hamatsiana ny fialan-tsasatrao manaraka
Rehefa manomboka manidina any amin'ny antsasaky ny firenena ny lanezy dia izao no fotoana hanombohana manonofy momba ny fialantsasatra main'ny masoandro manaraka. Tsy mbola kely dia kely ny fanaovana drafitra fitehirizana vola izay hamatsy vola ny fitsangantsanganana an-tsambo manaraka anao, fitsangatsanganana an-dàlana manerana ny firenena, na a oasis amoron-dranomasina. Na izany aza, ny tahiry dia tsy hangonina mandritra ny alina, ka izao no fotoana hanaovana drafitra.
Tsy misy zavatra manimba ny fialan-tsasatra mety haingana noho ny manahy momba ny fomba handoavanao ny dia. Rehefa nifarana ny fialantsasatra ary miverina amin'ny laoniny ny fiainana, ny fametrahana drafitra hividianana vola kely hanaovana traikefa nahafinaritra no fanalahidy. Raha vantany vao vonona ny hidona amin'ny làlana ianao dia afaka mahazo vola mandany vola amin'ny Internet amin'ny tranokala iCash, fa mandra-pahatongan'izany dia tonga ny fotoana hiasana. Andao hijery fomba vitsivitsy mamelombelona anao hividianana ny fialan-tsasatrao manaraka.
Ny vola fanampiny dia midika asa fanampiny. Raha te hitahiry vola haingana ianao amin'ny vakansy manaraka dia mety mila maka asa tapa-potoana ianao. Na azonao atao mahita ora vitsivitsy miasa antsinjarany, na mampiasa ny fiaranao hitadiavam-bola amin'ny mpamily Uber ianao, misy toerana maro hahitana asa tapa-potoana.
Toeram-pisakafoanana na bara
Mpamily Uber / Lyft
Asa tsy ampoizina
Trano / biby fiompy / zaza mipetraka
Mpanampy amin'ny Virtual
Amidio ny entanao
Tsy tianao ve ny mitady vola amin'ny fanadiovana ny lakalyo sy ny lalimoanao? Mety ho gaga ianao mahita hoe firy ireo entana tsy ampiasaina sy hadino no miery ao an-joron-trano maizin'ny tranonao. Ny fivarotana entana toy ny gym sy ny kojakoja fanatanjahan-tena, ny fitaovana elektronika, ny boky taloha ary ny akanjo dia afaka mitondra vola fanampiny. Topazo maso manodidina ny tranonao ary manapaha hevitra hoe inona no tianao hizarana mba hamatsy ara-bola ny dia fialantsasatrao manaraka. Tsidiho ireo tranonkala toa an'i eBay, Etsy, Poshmark, ary LetGo hijerena izay amidin'ny entana mahazatra, ary avy eo manomboka mamorona lisitry ny anao manokana.
Tapaho ny teti-bolanao
Ny ankamaroan'ny olona dia hahita fa raha manoratra teti-bola ho an'ny fandaniany isam-bolana izy ireo, dia misy toerana azo anaovana fihenam-bidy. Raha te-hihary vola ianao fialantsasatra eny an-dalana dia mila atao sorona izao. Topazo maso ny fandanianao vola ary manontania tena hoe inona no tianao avelanao vetivety na maharitra hahafahanao mivezivezy. Ireto misy toerana vitsivitsy azonao ahena ny fandanianao.
Fonosana tariby fanampiny
Famandrihana tsy ilaina
Fampiasana ny fiaranao hahazoana vola latsaka ambanin'ny asa an-kilany fa zava-dehibe ny fanekena fa mety ho fotoana maharitra io mihoatra ny tahiry fialan-tsasatrao. Amin'ny alàlan'ny fampiasana fotsiny ny fiaranao hitaterana mpandeha dia afaka mahazo vola miditra ianao. Manaova ny fandaharam-potoananao manokana ary manamboara ny làlanao manokana hifanaraka amin'ny fiononanao eo am-pitadiavam-bola amin'ny fiara izay hipetraka eo amin'ny lalambe.
Raha toa ianao efa manonofinofy hipetraka eny amoron-dranomasina miala sasatra amin'ny masoandro, izao no fotoana hanombohana fanaovana teti-bola. Araho ny sasany amin'ireto torohevitra mahasoa ireto mba hanampiana anao hamatsy vola ny dia fialan-tsasatrao manaraka.